Apple က waterproof iPhone ကိုဖော်ပြ7- သတင်း Rule
Apple က waterproof iPhone ကိုဖော်ပြ 7
နယူးအရောင်များ, သေးငယ်တဲ့ iPhone အတွက်ပိုမိုမြန်ဆန် processor ​​နှင့်ကြာကြာဘက်ထရီသက်တမ်း 7, iPhone အတွက်နောက်ကျောအပေါ်နှင့် Dual-ကင်မရာများ7Plus အား - ဒါပေမယ့်ဟောကိန်းထုတ်အဖြစ်, အ headphone jack ကိုနောက်တဖန်မသည်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Apple ကရေစိုခံ iPhone ကိုထုတ်ဖော်ပြသ7ကင်မရာအသစ်နှင့်အတူ … လက်နှင့်မျှမ headphone jack” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 8th စက်တင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2016 07.04 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Apple က iPhone ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်7နှင့်7နောက်ထပ်, သူ့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်စမတ်ဖုန်းများ, အသစ်အတွင်းနှင့်အတူအလားတူလူမီနီယံကိုကြည့်ယခုမူကားရေစိုခံရှိသည်သော, အသစ်ဖိအား-ထိခိုက်မခံတဲ့ home ခလုတ်ကို, အသစ် Dual-camera ကို features တွေနှင့်မျှမတို့နားကြပ် socket.
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက်၏ Apple ရဲ့အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, Phil Schiller က, စမတ်ဖုန်းကိုကြေညာဖို့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအတွက်ဘီလ်ဂရေဟမ် Civic ပရိသတ်ခန်းမမှာစင်မြင့်မှယူ, ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ် iOS ကိုနှင့်အတူဖြန့်ချိဖို့ပထမဦးဆုံး 10 တိုးတက်လာသောအကြောင်းကြားစာများနှင့်စာတိုပေးပို့ရေး features တွေနှင့်အတူ iPhone နှင့် iPad များအတွက် software ကို.
သစ် iPhone ကိုမှအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှု, သို့သော်, ထိုစကြဝဠာ 3.5mm headphone jack ၏ဖယ်ရှားရေးဖြစ်ပါသည်, စမတ်ဖုန်း၏အောက်ဆုံးသို့ဖြတ်ခံရဖို့အသုံးပြုနဲ့ audio-ထုတ်လုပ်အီလက်ထရွန်းနစ်နီးပါးပုံစံအားလုံးကိုဖို့ဘုံတည်းဟူသော. အစား, Apple ကအသုံးပြုသူများ Lightning port ကိုဘက်ယမ်းလိမ့်မည်မျှော်လင့်, အရာလေ့အာဏာနှင့်ဖိုင်လွှဲပြောင်းအသုံးပြုသည်, အသံများအတွက်, ထိုကဲ့သို့သော Apple ရဲ့ Beats နားကြပ်အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းသောသူတို့သည်အဖြစ်သို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့နားကြပ်.
Lightning connector ကိုနားကြပ်နဲ့တစ်ဦး Lightning-to-analogue adapter သစ်ကို iPhone နှင့်အတူထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်.
ခီကပြောပါတယ်: "Apple က EarPods ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနားကြပ်များမှာ. ယခုငါတို့ Lightning မှသူတို့ကိုရွေ့လျားနေ. အဘယ်ကြောင့်? ကဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်, စွမ်းအား, တစ်ဦး analogue connection ကိုကျော်ရိုးရှင်းစွာမဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ကြောင်းနှင့်များစွာသောအခြားအားသာချက်များ.
"ဒီ analogue headphone jack ဟာအလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူခဲ့. ဒါပေမယ့်အပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့အကြောင်းပြချက်ရဲစွမ်းသတ္တိသည်. အပေါ်ကိုရွှေ့ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံး betters အသစ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့သတ္တိ။ "
Apple ရဲ့အသစ် In-နားကိုကြိုးမဲ့နားကြပ်, AirPods. ဓါတ်ပုံ: စတီဖင် Lam / Getty Images
Apple ကလည်း၎င်း၏ EarPod In-နားကိုဘူးသီး၏အသစ်တစ်ခုကို set ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ, cable ကိုမရှိဘဲဤအချိန်, AirPods ကိုခေါ်, ကနားကြပ်ဆိပ်ကမ်းကနေအကူးအပြောင်းလျော့ပါးလိမ့်မည်မျှော်လင့်သော.
Bluetooth ကိုနားကြပ်စျေးနှုန်းများနှင့်စွမ်းရည်၏အကွာအဝေးအတွင်းကျယ်ပြန့်ရရှိနိုင်ပါသည်, နှင့်ကြပြီ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်အတွက်လူကြိုက်များဖြစ်လာ, ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ကြိုးမဲ့ In-နားကိုဘူးသီးတိုဘက်ထရီသက်တမ်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာန့်အသတ်နှင့်အားနည်းသောဆက်သွယ်မှုကိုကျော်လွှားရန်ရုန်းကန်ခဲ့ကြ. ထိုကဲ့သို့သော Motorola ရဲ့အဖြစ်ကုမ္ပဏီတွေကနေယခုနှစ်ပြန်လွတ်လာအများအပြားကအသစ်မော်ဒယ်, Bragi နှင့် Samsung သူတို့အားပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်.
Phil Schiller က, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက်၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, ကပြောပါတယ်: "ယခုတိုငျအောငျ Up ကိုအဘယ်သူမျှမဒါငါတို့ရှိသမျှသည်သူတို့ကိုခံစားနိုငျကြိုးမဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြုကြရန်ခက်ခဲသောအမှုအရာကိုပြုပြင်တာတွေ၏စိန်ခေါ်မှုအပေါ်ပြီ. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က Apple AirPods လုပ်နေလုပ်နေယျ။ "
AirPods ကုန်ကျမည် $170 နှင့်အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းရရှိနိုင်. Apple ရဲ့နားကြပ်အမှတ်တံဆိပ်စည်းချက်သံလည်းအသစ်သောကြိုးမဲ့မော်ဒယ်များလှတျမညျ.
ပိုမိုမြန်ဆန် A10 Fusion ချစ်ပ်
အားလုံးယခင် iPhone ကိုမွမ်းမံမှုများနှင့်အတူအမျှ, အိုင်ဖုန်း7နှင့်7Plus အားပိုမိုမြန်ဆန်များ, ပိုပြီးအင်အားကြီးပရိုဆက်ဆာ - Apple ရဲ့ A10 Fusion ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က iPhone 6S ထံမှ A9 အစားထိုး - ဒီဇိုင်းမှာသိမ်မွေ့သောအပြောင်းအလဲကိုမြင်လျှင်သစ်စမတ်ဖုန်း၏ပြင်ပနှင့်အတူ.
အသစ် Quad-core A10 Fusion processor ကိုရလိမ့်မည် 120 ကြိမ်မူရင်းကို iPhone နှင့် Apple ၏စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်လည်းတိုးတက်လာအာဏာကိုထိရောက်စွာတဆင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးချဲ့လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်.
Apple က iPhone ကခန့်မှန်း7ကယ်နှုတ်မည်, ပျမ်းမျှအားဖြင့်, အိုင်ဖုန်း 6S ထက်ဘက်ထရီသက်တမ်းနှစ်ဦးထက်ပိုသောနာရီ.
အဆိုပါ iPhone ကို7အသစ်တစ်ခုကိုတောက်ပြောင်အနက်ရောင်အရောင်လာနှင့်ယခင်ထက်ကျော်သစ်ဖုန်းများမှသေးငယ်တဲ့အမြင်အာရုံ tweaks ၏စုံတွဲတစ်တွဲ marking နောက်ကျောအပေါ်ယခင်ကမြင်နိုင်အင်တင်နာလိုင်းများကိုဝှကျထားလိုက်ပါတယ်. အဆိုပါ iPhone အသစ်လည်း IP67 စံချိန်စံညွှန်းမှယခုရေစိုခံသည်, Samsung နှင့်အခြားသူများထံမှပြိုင်ဘက်နှင့်အညီသို့ဆောင်ခဲ့.
အဆိုပါ home ခလုတ်ကိုလည်း Apple ရဲ့ MacBook trackpad အဖြစ်အလားတူဖိအား-ထိခိုက်မခံတဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုမှမြှနှင့် iPhone 6S ၏ 3D ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ခဲ့, တကယ်တော့ depressing မပါဘဲဖိအားပေးတဲ့အခါသေးငယ်တဲ့တုန်ခါအလွင်ပင်အရသာသုံးပြီးလှုပ်ရှားမှုတူအောင်ဖန်တီးသော. အသစ် button ကိုနောက်ထပ်အမူအယာကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးစမတ်ဖုန်း၏နောက်ဆက်တွဲဗားရှင်းလုံးဝကိုဖယ်ရှားခံရဖို့ခလုတ်ကိုအတွက်လမ်းခင်းနိုင်.
အများသောသူတို့က, အိမ်တွင် button ကိုအိုင်ဖုန်း၏အားနည်းမှတ်၏တဦးတည်းခဲ့, အစားထိုးလိုအပ်သောကြောင့်မှလှည်သက်သေပြသည့် လက်ဗွေ sensor နဲ့အောက်မှာဝှက်ထားလုံခြုံ chip ကို.
Plus အား Dual-camera ကို
အဆိုပါ iPhone ကို7Plus အားနောက်ကျောအပေါ်ကင်မရာနှစ်လုံးရှိပါလိမ့်မယ်. ဓါတ်ပုံ: မော်နီကာ Davey / EPA
အဆိုပါ iPhone ကို7လည်းပြိုင်ဘက်နှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ဦးတိုးတက်လာသောကင်မရာက system ကိုရလိမ့်မည်. အဆိုပါ iPhone ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအကောင်းဆုံးကင်မရာကိုရှိသည်ဖို့အသုံးပြု, ဒါပေမယ့် iPhone ကို Samsung က 6S မသာမှခိုင်မာသောယှဉ်ပြိုင်ရင်ဆိုင်, ဒါပေမယ့် HTC က, LG နှင့်မြင့်တက်ကြယ်တရုတ်ကုမ္ပဏီဟွာဝေး.
အဆိုပါကင်မရာကိုယခုတစ်ပိုမြန်ပါတယ်, ပိုကြီးတဲ့ 12-megapixel ကင်မရာ sensor ကို, ပိုကောင်းတဲ့အနိမ့်အလင်းဓါတ်ပုံနှင့်တစ်ဦးပိုမိုစစ်မှန်တဲ့-သေံ flash ကိုတစ်ဦးပိုမိုမြန်ဆန် f1.8 မှန်ဘီလူး. အိုင်ဖုန်းအားလုံးဗားရှင်းယခု optical image stabilization ရှိသည်လိမ့်မယ်, အပိုကြီး Plus အားမော်ဒယ်မယ့်.
အဆိုပါ update ကပိုကြီး iPhone ကို၏နောက်ကျောတွင်တပ်ဆင်အသစ်တစ်ခုကို Dual-camera ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်7နောက်ထပ် – တဦးတည်း 12-megapixel ကင်မရာ telephoto မှန်ဘီလူးတ 12-megapixel ကင်မရာ wide-angle မှန်ဘီလူး – တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်သူတို့အားအလားတူ LG ရဲ့ G5. Huawei နှင့် LG ကနှစ်ဦးစလုံးတွင်အောင်မြင်မှု၏အမျိုးမျိုးဒီဂရီမှနောက်ကျောအပေါ်ကင်မရာနှစ်လုံးသုံးပြီးနောက်ဆုံးနှစ်တွင်စမတ်ဖုန်းပြန်လွတ်လာကြပြီ.
Apple ကယခုဖွင့် optical zoom ကိုနှစ်ဦးစလုံးမျက်ကပ်မှန်နှင့်အတူ2ဆမှခွင့်ပြု, ထက်ကျော်လွန်သွားဒီဂျစ်တယ် zoom ကိုသုံးပြီး. တစ်ဦးကအခမဲ့ update ကိုလည်းသုံးစွဲသူများကအကွာအဝေးတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ဖို့နှစ်ဦးစလုံးမှန်ဘီလူးကို အသုံးပြု. နောက်ခံဝါးဖို့ခွင့်ပြုနှင့်တစ်ဦး bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးလိမ့်မည်, ပြိုင်ဘက်ကထုတ်လုပ် software ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆင်တူ.
ခီကပြောပါတယ်: "တစ်ဦး dSLR တွင်သင်သည်ကြီးမားတဲ့မှန်ဘီလူးနှင့်အတူ zoom မှမှန်ဘီလူး element တွေကိုရွှေ့နိုင်. ဒါပေမယ့်ဖုန်းပေါ်မှာသင်မပွုနိုငျ. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အတူတူလုပ်ဖို့ကင်မရာနှစ်ခုနှင့်နှစ်ခုမှန်ဘီလူးကိုသုံးနေတယ်. အ zoom ကို၏အရည်အသွေး, ပင် software ကို zoom ကိုနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ 10x ဖို့ကတက်တွန်းအားပေးရန်ဆုံးဖြတ်မီကထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ "
အဆိုပါ iPhone ကို7အပေါ်စတင်ပြီးလေးအရောင်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည် 16 မှာစက်တင်ဘာလ $649 သိုလှောင်မှု 32GB များအတွက် – 128GB နှင့် 256GB ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်နှစ် 16GB အခြေစိုက်စခန်းသိုလှောငျကနေတိုးမြှင့်. အဆိုပါ iPhone ကို7Plus အားမှကုန်ကျမည် $769, နောက်တဖန်သိုလှောင်မှု 32GB နှင့်အတူ. အဆိုပါဂျက်လေယာဉ်-အနက်ရောင်မော်ဒယ်များ 128GB နှင့် 256GB ကိုသာ variants ဖြစ်လိမ့်မည်.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က iPhone 6S, 6S ကို Plus အားနှင့် iPhone အရှေ့တောင်ဆဲရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်, ယခုသိုလှောင်မှု 32GB နှင့်အတူစတင်. အဆိုပါ iPhone ကိုအဆင့်မြှင့်အစီအစဉ်ကိုလည်းဗြိတိန်တွင်ရရှိနိုင်စေလိမ့်မည်.
ရွပိုး, Tock, Tock?
အခုချိန်အထိ, Apple ရဲ့စမတ်ဖုန်းဟာသူ့ရဲ့အစဉ်အလာလွှတ်ပေးရန်အချိန်ဇယားအရသိရသည်တိုင်းနှစ်နှစ်ပြည့်စုံဒီဇိုင်းအသစ်ခဲ့ကြ, တိုးတက်လာသောပရိုဆက်ဆာနှင့်အနည်းငယ် features အသစ်သည်အခြားနှစ်သံသရာထဲမှာ "Tock" ထအောင်နှင့်အတူ. Intel နှင့်အခြားသူများအားလည်းကို tick ကိုသုံး, Tock ထုတ်ကုန်သံသရာ, အစဉ်အလာကို tick အပေါ်တိုးတက်လာသောဘက်ထရီသက်တမ်းပြသ.
အဆိုပါ iPhone ကို6ကို tick ခဲ့သည်, သော iPhone ကို 6S အ Tock ခဲ့ဆိုလိုသည်. ယခင်အိုင်ဖုန်းအလားတူစက်မှုဒီဇိုင်းပေါင်းအသစ်အရောင်များနှစ်ကောင်ရဲ့ iPhone ကို7ရဲ့အသုံးပြုမှုလမ်းကြောင်းသစ်, သစ် iPhone ကိုအဓိပ္ပာယ်ဟာဒုတိယထိုကဲ့သို့သော Tock အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်. တိုးတက်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်အနည်းငယ် features အသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, အရာအချို့ကိုဆော့ဖ်ဝဲကိုမွမ်းမံမှုများမှတဆင့် 2015 ရဲ့ iPhone 6S မှလာကြလိမ့်မည်, ဖောက်သည် woo ဆက်လက်ရန်လုံလောက်သောဖွစျလိမျ့မညျကိုမွငျခံရဖို့ဖြစ်နေဆဲ.
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးမားဆုံး - - နှင့်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းကိုအစားထိုးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဂေဟစနစ်မှာပိုဖြုန်းဖို့သူတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်း "Apple ရဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုက၎င်း၏ကြီးမားသော install အခြေစိုက်စခန်းစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်,"ဥရောပကမိုဘိုင်း device များအတွက် Francisco ကJerónimo IDC မှရဲ့သုတေသနညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်. "ကျနော်တို့ကိုချဉ်းကပ်သည့်အတိုင်း 80-85% စမတ်ဖုန်းထိုးဖောက်မှု, ဒါကြောင့်လူတွေသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစမတ်ဖုန်းဝယ်ပေမယ့်ပြိုင်ဖက်ကနေဖောက်သည်ကိုဆွဲဆောင်အကြောင်းမရှိတော့ပါပဲ။ "
UK ရှိ, Apple ကကျော်အကြီးအကဲပြိုင်ဘက် Samsung ကအတူစစ်တိုက်ခိုက်သည် 20% လည်ပတ်မှုစနစ်များအကြားအကူးအပြောင်းကြောင့်အသုံးပြုသူ. ဒါဟာ iPhone ကိုအတူအရှိဆုံး Switcher ဂိုး 6, အသစ်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားမိတ်ဆက်ပေးသော, ယခုမူကားကယခင်အိုင်ဖုန်းကနေအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသူများအတွက်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားရမယ်.
Apple ကယ့်ကိုကျနော်တို့ headphone jack နည်းများအနည်းငယ်ခြားနားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲလို့ထငျပါသလား?
တရုတ်လာ. Samsung ကတည်ငြိမ်သည်. Apple ရဲ့ iPhone ကို7အထင်ကြီးဖို့ရှိပါတယ်
မာရှယ်ဗိုလ်မှူး II ကို Bluetooth ကိုနားကြပ်: သူတို့လည်းအသက်အရွယ်အဘို့ကြာရှည်အရာနှင့်ကြီးစွာသောအသံ
32399	6 ပန်းသီး, အပိုဒ်, IOS ကို, iPhone ကို, iPhone ကို 7, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ, တယ်လီကွန်း
← Samsung ၏ Galaxy Note ကို7ဆန်းစစ်ခြင်း MacOS Sierra: သင်က Apple ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာသစ် Software များအကြောင်းသိထားရန်လိုအပ်ထိပ်တန်းငါးခုသောအရာမြား →